Hogaamiyeyaasha bariga Afrika oo taageeray mudo kordhinta DFKMG, baaqna u diray… – SBC
Hogaamiyeyaasha bariga Afrika oo taageeray mudo kordhinta DFKMG, baaqna u diray…
Shirkii hogaamiyeyaasha urur goboleedka Iskaashiga dhaqaalaha ee Bariga Afrika (East African Community) ee ka socdey magaalada Darsalam ee caasimada wadanka Tanzania ayaa al soo afharey iyadoo laga soo saaray baaq ku aadan arimaha Soomaaliya.
Shirkan oo ay ka qayb galeen madaxweyneyaasha wadamada Kenyan Mwai Kibaki, Burundi Pierre Nkurunziza, Ugandan Yoweri Museveni iyo Tanzanian Jakaya Kikwete & Ra’isalwasaaraha Rwanda Bernard Makuza ayaa loogu baaqay Mareykanka & midowga Yurub inay kor u qaadan taageeradooda hawlgalka ciidan ee midowga Afrika uu ka wado Soomaaliya ee AMISOM. “Shirku wuxuu ugu baaqayaa beesha calaamka gaar ahaan Mareykanka & Midowga Yurub inay kordhiyaan taageerada hawlgalka nabad ilaalinta AMISOM taasi oo ay ka mid tahay wax ka qabashada qatarta burcad badeeda” ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay gunaanadkii shirkaasi.
Hogaamiyeyaasha shirka ka qayb galey waxay si buuxda u taageereen mowqifka ama go’aanka midowga Afrika uu ka qabo ee uu ku taageeray mudo kordhinta sanadka ah ee jiritaanka hay’adaha dastuuriga ah ee dawlada KMG ah ee Soomaaliya.
9-kun oo ciidamo oo ka socda wadamada Ugandha & Burundi ayaa ku sugan magaalada Muqdishu ee caasimada Soomaaliya iyagoo taageeraya dawlada KMG ah oo itaal liidata kana talisa qaybo kooban oo ka mid ah magaalada Muqdisho, laakiin shantii ee ugu dambeysay waxay qaadeen talaabooyin ay ku baahinayaan awooda dawlada KMG ah ee qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho.